Basikety – N1B Lehilahy: tompondaka 2019 ny ASB Itasy | NewsMada
Basikety – N1B Lehilahy: tompondaka 2019 ny ASB Itasy
Nifarana, ny alahady lasa teo, ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, N1B lehilahy, taranja basikety, natao tany Tsiroanomandidy. Azon’ny ekipan’ny ASB Itasy ny amboara tamin’izany.
Isa 72 no ho 59 ny nandavoan’ny ekipan’ny ASB Itasy ny USF avy any Matsiatra Ambony, ekipa roa niatrika ny lalao famaranana ny alahady lasa teo, tao amin’ny kianjan’ny Bika Tsiroanomandidy. Azo lazaina ho nifandanja ihany ny fihaonana tany amin’ny ampaham-potoana voalohany na tsy nitovy aza ny lenta teo amin’ny roa tonta. Isa 39 no ho 25 ny nentina niala sasatra. Nihanahazo aina kosa ny ASB Itasy tamin’ny ampaham-potoana faharoa ary nazava ny fandreseny.
Tafapetraka teo amin’ny laharana fahatelo kosa ny ekipan’ny TMBB Analamanga rehefa nifandona tamin’ny MBC Atsinanana, nandritra ny lalao fiadian-toerana. Isa 66 no ho 54 ny nisarahan’ny roa tonta nandritra izany.
Voafidyho mpanazatra mendrika tamin’ity fifaninanana nasionaly, taranja basikety N1B, lehilahy, ity andriamatoa Gérard, mpanazatra ao amin’ny USF Matsiatra Ambony. Nahafaty baolina betsaka indrindra kosa i Tsilefitra Jernil Claud, laharana faha-9 ao amin’ny ekipan’ny MBC Atsinanana. 65 ny isa azony tamin’izany. Mpilalao mendrika tamin’ity fifaninanana ity i Fandrama Benoit Narcisse, laharana faha-15 avy amin’ny ASB Itasy.
Mpanazatra mendrika: Atoa Gérard, USF Matsiatra Ambony
Mpamono baolina mendrika: i Tsilefitra Jernil Claud, MBC Atsinanana
Mpilalao mendrika: i Fandrama Benoit Narcisse, ASB Itasy
Laharana faha-4 : MBC Atsinanana
Laharana faha-3 : TMBB Analamanga
Tompondaka lefitra : USF Matsiatra Ambony
Tompondaka : ASB Itasy